qabooji cuntada badbaadada - Best baraaraan Cuntada la xanibay la qalajiyey
There may be times when you have to stay out for a certain while. Under these circumstance, waxaad rabi doontaa inaad cunto kula joogto maalmaha aad ka maqan tahay guriga. Dabiici ahaan, ma awoodi doontid inaad qaadato cunto karsan, waana halka ay muhiimadda kaydinta cuntada si habboon u soo gasho. cuntooyinka leh cimri dheer oo loo soo gada in lagu kaydiyo raashin degdeg ah.
Mid ka mid ah ikhtiyaarka noocyadan cuntooyinka ah waa baraf-qallalan. Noocyada noocaan ah ee cuntooyinka ayaa mara hab si tartiib ah looga saaro biyaha ay ku jiraan. Si tartiib ah u saarista waxa ku jira biyuhu waxay hubisaa in badi nafaqooyinka iyo fiitamiinada ay sii ahaanayaan. Inta badan, kaliya ku dar biyo yar oo ha fadhiisto qiyaastii 10 daqiiqado ka dib si fiican u walaaq.
Cunto noocan oo kale ah waxay qaadataa waqti aad u dheer qaarna waa la kaydin karaa ilaa iyo 25 sanado ama ka badan. Tani dabcan waxay la macno tahay inaadan u baahnayn inaad beddesho marar badan ka hor taariikhda dhicitaankooda waxayna kuu badbaadinaysaa lacag mustaqbalka fog.
On barwaaqo nolosha, tusaale ahaan, Cuntooyinka la qaboojiyey ee la qalajiyey aad bay u kala duwan yihiin, laga bilaabo hilibka lo'da iyo miraha ilaa macmacaanka macaan sida cheesecakes.
Baraf-qallalan – oo ay ku jiraan khudaarta ceeriin, maraq iyo fuud isku qasan, wax soo saarka caanaha ee noocyada kala duwan – waa qayb kale oo caan ah oo lagu ilaaliyo cuntooyinka qallalan.
Mar labaad, Xaqiiqdan waxaa loo arkaa inay tahay isha farxadda leh ee loogu talagalay dadka hoos u dhiga xigmadda dhismaha sahayda cuntada degdegga ah; waxa ay kaa caawinaysaa in la qiyaaso ereyada quudhsiga ah ee ka soo cararaya af go'an oo inta badan ay ka buuxaan cuntooyin degdeg ah oo ka samaysan waxyaabo isku mid ah oo "diyariyeyaashu" ay ku kaydiyaan tiro badan..
Markaa, sida muuqata, the ‘awkwardness’ of storing dry foods lies in a matter of timing preference: dadka ku dhaqma xirfadaha badbaadada waxay dib u dhigaan ku qanacsanaanta, maalgelinta cuntada ay cuni doonaan mustaqbalka, halka kuwa wax ka sheegana ay lacag ku lumiyaan – wax badan la amaahday – Cuntooyinka "jaban"., hadda way cunaan oo hadhow bay bixiyaan. Waxay noqon kartaa “qabow”, laakiin hubaal maaha mid caqli badan.
Ka sokow rabitaanka dhimashada qalloocan ama rabitaanka cuntada adag ee dhibaatada, muxuu qofku wakhti ugu qaadan karaa inuu helo sahay ku filan oo cunto la kaydin karo?
Hadda sidee u qorshaysaa kaydinta cuntadaada
Qorshaha kaydinta cuntada degdega ah
Waa kuwan qorshayaal yar oo adiga iyo qoyskaaga kaa caawinaya inaad qorsheysataan barnaamijka kaydinta cuntada markaad maqan tahay.
Ku bilow a 72 Xidhmada Cuntada Degdegga ah ee Saacadda iyo 7 Cunnada Maalinta ee Guriga Buurta waxay qaboojiso bacaha cuntada ee engegan xubin kasta oo qoyskaaga ah oo gurigaaga jooga. Had iyo jeer ku hay biyo dheeraad ah meel qabow, hadday suurtagal tahay.
U yeelo adiga iyo qoyskaaga barnaamij kayd cunto oo degdeg ah oo muddo gaaban ah 3 ku 6 bilo gurigaaga. Waxaad heli kartaa noocyo kala duwan oo weyn oo bilow ah, khudaarta iyo macmacaanka leh Thrive life Cuntooyinka la qaboojiyey ee la qalajiyey, kuwaas oo nolosha shelf ee 7 ku 30 sano. Cunto nolol maalmeedku waa sahlan tahay in lagu diyaariyo biyo kulul ama qabow waana cuntada ugu macaan ee la qaboojiyey ee suuqa..
Hayso adiga iyo qoyskaaga barnaamijka kaydinta degdega ah ee mudada dheer 1 ku 2 sano, laakiin ka dheer haddii aad awoodid. Dadka qaar baa kaydsada 3 ku 5 sanado cunto la qaboojiyey. Thrive life Freeze Dried Foods are excellent for this, as they have a shelf life of 25-30 sano. You can get them in pre-designed food storage packages, saving time and money! It is recommended that you keep these foods in a cool place in your home, such as a garage, basement, or cellar, if available.
The freeze-drying process used to create freeze-dried food in thrive life preserves the best qualities of the food. Most importantly, it retains the natural enzymes in the food, so that you eat healthily. Cuntada ayaa sidoo kale la dammaanad qaaday inay dhadhamin doonto ka dib 30 sano.
Cuntooyinka qallalan ee barafaysan ee noloshu kobciso waxaa lagu sameeyaa maaddooyin la mid ah cuntooyinka guriga lagu sameeyo, laakiin qaado kaliya 10 daqiiqado lagu diyaariyo. Cuntooyinka la qaboojiyey ayaa la abuuray iyadoo la adeegsanayo saddex hab oo aasaasi ah.
Marka hore, waxay iibsadaan alaab cayriin oo tayo leh. Marka labaad, Qalabkaaga qaboojinta cuntada ayaa leh faa'iidooyin kala duwan, sida ay cuntadaada dhadhamiso, eeg oo sii cusboonaada, miisaan yar, oo aad hayso nafaqooyin badan. Iyo saddexaad, Nidaamkeeda karinta waxay ka dhigtaa cuntooyinka la qaboojiyey ee guriga lagu sameeyo, one of the only companies to cook their recipes fresh before freeze-drying. Others simply assemble freeze-dried ingredients in a package.
Tani waa mid ka mid ah shirkadaha kaydinta cuntada ugu fiican sababtoo ah waxay si aad ah u maalgelisaa dhadhanka iyo bixinta dhammaan maaddooyinka loo baahan yahay si loogu diyaariyo cuntooyinka tayada ugu fiican.. Shirkadani waxa kale oo ay leedahay door cajiib ah oo loogu talagalay kuwa ku raaxaysta cunista cuntooyinka aan lahayn gluten-free iyo khudradda, waxayna ilaalisaa qiimaha jaban ee maaddooyinka la carte, markaa waxaad haysataa fursad aad ku aragto haddii iibsashada cuntooyinka qaarkood ay tahay maalgashi wanaagsan. kaydinta. cunto waqti dheer.
Kaydinta cuntada Augason Farms
Augason Farms waxay bixisaa isku dhafka maaddooyinka muhiimka ah, sida maraqa, miraha la qaboojiyey, digir, cabitaan isku dhafan, iyo khudaarta. Biyaha la cabbo iyo filtarrada biyaha ayaa ka maqan doorashadaada. Haysashada xaddi wanaagsan oo cunto badbaado ah ayaa wanaagsan, laakiin biyo nadiif ah ama kulul la'aanteed wax badan ayaa faa'iido la'aan noqon kara xaalad degdeg ah. Waxyaabaha muhiimka ah ee degdega ah waa adeeg ku siinaya xalalka sahayda biyaha xulashada cuntadaada.
Haddii aad qorsheyneyso inaad xero ama u baahato cuntadaas waqti gaaban, waxa fiican inaad dukaankan ka doorato cuntooyinka baakadaysan – ilaa aad u malaynayso in aad heli karto qasac 52-wiqiyadood oo farmaajo budada ah oo aan waxba ahayn. waqti. Waxa aad soo iibsan kartaa weelasha kaydinta cuntada ee waaweyn oo leh cunto kugu filan oo soconaysa dhawr sano, laakiin sidoo kale waxaa jira fursado loogu talagalay xaaladaha muddada-gaaban sidoo kale.
Adeegani waxa uu bixiyaa isku dhafka ugu wanaagsan ee waxyaabaha daruuriga ah sida maraqa, miraha la qaboojiyey, digir, cab isku darka khudaarta. Biyaha la cabbo iyo filtarrada biyaha ayaa ka maqan doorashadaada. Haysashada xaddi wanaagsan oo cunto badbaado ah ayaa wanaagsan, laakiin biyo nadiif ah ama kulul la'aanteed wax badan ayaa faa'iido la'aan noqon kara xaalad degdeg ah.
Kaydinta cuntooyinka xigmadda leh
Xirmooyinka badbaadada ama degdega ah waa in ay si cad uga kooban yihiin cunto. Ma aha kaliya cunto kale, laakiin guud ahaan cuntooyinka badbaadada ee la qaboojiyey ee ku habboon xaaladaha aad isku aragto. Mid ka mid ah shirkadaha ugu caansan ee ku takhasusay soo saarista iyo iibinta cuntada horay loo sameeyay ee ujeedooyinka degdegga ah waa Cuntooyinka xigmadda leh., Inc.
Dad badan ayaa ku andacoonaya in Cuntooyinka xigmadda leh ay bixiyaan badbaadada ugu fiican, degdeg ah, iyo cunto kaambada suuqa, iyo sabab wanaagsan. Si ka duwan cuntooyinka kale ee la midka ah, Cuntooyinka xikmadda leh ee la qaboojiyey ayaa ugu raqiisan dhammaan. Intaa waxaa dheer, waxa lagu soo guray bacaha cuntada ee is haysta, marka waa mid la qaadi karo oo iftiin badan, dhadhan fiican leh, oo ku yimaada dhowr nooc.
Cuntooyinka badbaadadu waa inaanay si fudud u lumin si ay wakhti dheer u kaydsan karaan. Cuntooyinka xigmadda leh waxay leeyihiin a 25 nolosha shelf sanadka!
Alaabooyinka Cuntooyinka xikmadaysan waxay sidoo kale ku yimaadaan baakad ama bacaha dib loo daabici karo, kuwaas oo markaa lagu kaydiyo si weyn, baaldiyo caag ah oo adag. Baaldiyadan ayaa si la yaab leh u fudud inay qaadaan, xataa ilmaha, si markaas xaalad degdeg ah adiga iyo ilmahaagu aad u qaadan kartaan cuntada bil ama laba bilood.
Baaldiyadu sidoo kale waxay u anfacayaan waxyaabo kale, sida qodista iyo tuurista qashinka. Dheeraad ah, weel walba hoostiisa ayaa loo qaabeeyey si ay isu-xidhaan marka la isku dhejiyo, si aanay boos badan uga qaadin qolkaaga hoose, bakhaar, ama meel kasta oo aad qorsheyneyso inaad meel dhigto. cuntada badbaadada ay bixiyaan.
Markaad iibsanayso alaabada Cuntooyinka Wise Foods, waxaad kala dooran kartaa quraacda, fursadaha qadada iyo cashada, iyo sidoo kale xulashada khudaarta la qalajiyey ee gourmet-ka, miraha iyo hilibka.
Qaar ka mid ah xulashooyinka quraacda quraacda waxaa ka mid ah granola crunchy, badarka, iyo qorfe tufaax. Xulashadaada cashada iyo qadada waxay ka kooban tahay cunto macaan oo macaan leh sida baastada Alfredo, basbaaska ama macaroni iyo farmaajo, rotini, tortillas ama maraq basil yaanyo, stroganoff iyo teriyaki oo bariis ah. Alaabooyinkoodu aad bay u fududahay in la diyaariyo. Qaar ka mid ah cuntadaada waxay u baahan yihiin oo kaliya biyo karkaraya iyo ka dib 12-15 daqiiqado cuntadaadu diyaar bay noqon doontaa.
Wise food storage doesn’t necessarily end with disaster-related emergencies. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa cuntada degdega ah ee kaydsan wakhtiyada aad adiga ama qoyskaagu u baahan tihiin cunto degdeg ah, laakiin aad ayay u daalan yihiin inay wax karsadaan.
Qiimaha nafaqeynta iyo dhadhanka alaabta Wise Foods waa hubaal inay beddel weyn u noqon doonaan cuntooyinka guriga lagu sameeyo. Dheeraad ah, haddii aad kaydsato noocyadan cuntooyinka, Waxaad sidoo kale u diyaar garoobi doontaa dhibaato kasta oo dhaqaale oo iman karta mustaqbalka.
Joogteynta cuntada degdega ah waxay hubin doontaa in qoyskaagu had iyo jeer si wanaagsan u nafaqeeyaan wakhtiyada sicir-bararka iyo dhibaatooyinka dhaqaale.
Guriga buuruhu wuxuu qaboojiyey cunnada qallalan
Cuntooyinka Guriga Buurta, sii cunto la qaboojiyey wakhti go'an, all emergency foods should contain a combination of protein, carbohydrate, and fat. If you are packing your own emergency food storage with in-store items, it is ideal to have a selection of cured and canned meats, fruits and vegetables, cookies, badar, and water. There must be a box opening and a heat source, such as a stove or electric stove.
This Mountain House Meal Kit includes three breakfasts, three side vegetables, and six 10-ounce packages of lunch or dinner appetizers, enough food for one adult for three days. Blueberry iyo caanaha Granola, Ukun Bacon La Ruxay, Ham iyo basbaas Ukun la tumay, Beerta Cagaaran, Galleyda oo dhan, Iska jar digirta cagaaran, hilibka lo'da ee Stroganoff, Chicken Teriyaki, Chili mac leh hilib lo'aad, bariis iyo digaag, baastada guga, iyo hilib doofaar macaan iyo dhanaan leh bariis. Dhammaan cuntooyinkan badbaadada degdega ah waxaa si fudud loogu diyaarin karaa duruufo adag iyadoo lagu darayo biyo oo ay haystaan ​​nolol shelf ah oo ah toddoba sano. Macmiil ku qanacsan Christopher Coakley oo ka socda Santa Barbara, Calif. Ayuu yidhi, “Mountain House’s food generally tastes better than most freeze-dried alternatives.
Cuntada badbaadada guriga buuraha
Cuntooyinka Guriga Buurta 10 bacaha iyo gasacadaha, u baahan biyo qabow oo kaliya si ay si buuxda u fuuqeeyaan. Markaad u baahan tahay inaad isticmaasho kaydka cuntadaada degdega ah, xusuusnow mid kasta 10 sanduuqa – qiyaastii hal gallon – waa in uu qaataa kaliya hal bil. Mid ka mid ah cuntada ku jirta xirmooyinkan waa in aan la qaboojinin. Intaa waxaa dheer, Xidhmada inta badan waxa ay ka kooban tahay qaddar go'an oo kalooriyo ah oo aad isticmaali doonto haddii aad raacdo talooyinka qiyaasta la cayimay.
Being prepared with enough mountain house freeze dried foods will help you and your family through tough times. Sidoo kale, xirmada cuntada degdega ah waa in lagu kabaa fitamiino iyo macdan dheeri ah, maadaama aadan cuni karin khudaar badan inta lagu jiro musiibada iyo xilliga soo kabashada.
Once have an emergency food storage program, ka bilow samaynta liis fudud oo ku saabsan waxyaabaha adiga iyo qoyskaaga aad isticmaashaan maalin kasta – waxyaabaha laga yaabo inaad u baahato xaalad degdeg ah; sida cuntooyinka la jecel yahay & cabbitaannada, fitamiino & daawooyinka, dhar diiran & kabaha, bustayaal, baytariyada, shumacyo, lacag caddaan ah oo dheeraad ah, hab kale oo lagu kululeeyo cuntada ama biyaha, raadiyaha gacanta ku shaqeeya & toosh, iwm. Markaa, isu diyaari nooc kasta oo degdeg ah, oo ku raaxayso samayntiisa. Nolosha Thrive, aad ayaad ugu farxi doontaa inaad samaysay.
Alaabooyinka la qallajiyey ee Barafka qaboojiyey
Miraha la qallajiyey ee Barafka Wanaagsan
Qudaarta la qallajiyey ee Caafimaadka qabta
Qabooji caanaha la qalajiyey - Caano, Jiis, Labeen dhanaan
qabooji Hilibka la qalajiyey & Borotiinno
Sumpt to Go
Cunto fudud oo caafimaad leh oo dhadhan fiican leh
Cabbitaannada Ruvi oo caafimaad qaba oo nafaqo leh
Fuuqbaxa iyo Baraf qallalan
Miraha qallafsan iyo Cunto fudud oo qallafsan